Ukraine International Airlines dia manohy ny sidina mankany Yerevan amin'ny 4 Desambra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ukraine International Airlines dia manohy ny sidina mankany Yerevan amin'ny 4 Desambra
Ukraine International Airlines dia nanambara ny mety hamerenana ny sidina mankany Yerevan (Armenia) manomboka ny 4 desambra 2020. Ny famerenana aorian'ny fiatoana lava dia nanjary azo atao noho ny fitombon'ny toe-draharaha ao amin'ny faritra. Mikasa ny hampandeha sidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina "Zvartnots" ny UIA ary hiverina hiverina any Kyiv indroa isan-kerinandro.
UIA dia manara-maso akaiky ny zava-misy any amin'ny faritra sy ny toe-javatra misy ny valanaretina eto amin'ny firenena.
Azafady, mariho fa ny mpandeha miaraka amin'ny tapakila navoakan'ny banga UIA dia afaka mahazo fiasa mandroso vaovao amin'ny serivisy Manage My Bookings, izay ahafahan'ny mpandeha manova ny datin'ny sidina an-tserasera tsy miankina.
Nandritra ireo fotoana tsy mbola nisy toa azy noho ny areti-mandringana manerantany, ny Ukraine International Airlines dia mametraka ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny ekipa anay ho lohalaharana. Ny UIA dia manaraka ny fenitra avo lenta momba ny fiarovana sy ny fomba fanao araka ny nomen'ny World Health Organization, ny International Air Transport Association, ny European Aviation Security Agency, ny European Center for Disease Prevention and Control, ary koa ny Ministeran'ny Fahasalamana any Ukraine sy ny State Serivisy fiaramanidina.
Ataovy ny anjaranao amin'ny fahasalamam-bahoaka raha misafidy ny handeha hanao fialantsasatra ianao